हेर्नुस् सडकमा जेब्रा क्रसिङको अवशेष : पैदल यात्रु कति सुरक्षित? :: PahiloPost
हेर्नुस् सडकमा जेब्रा क्रसिङको अवशेष : पैदल यात्रु कति सुरक्षित?
राजधानीका सडक कसैका लागि पनि सुरक्षित लाग्दैनन् चाहे गाडीका लागि होस् या सर्वसाधारण नै। त्यसो त मुलुकको सबैभन्दा व्यस्त सडकमा पैदल यात्रीका लागि गतिलो व्यवस्था नै छैन। सडक पार गर्नुको जोखिम सबैभन्दा धेरै यहीँ छ। सडक पार गर्न ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ त छ तर चिन्नै कठिन हुने अवस्थामा।
सन् १९३० बाट विश्वमा आधुनिक जेब्रा क्रसिङको सुरुवात भएको पाइन्छ। बेलायतबाट थालनी भएको जेब्रा क्रसिङ सन् १९५० को दशकपछि भने विश्वका धेरै मुलुकमा यसलाई लागू गरिएको थियो। सडक सञ्जाल बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि जेब्रा क्रसिङ बनाउन थालियो। तर, सबैभन्दा सुविधासम्पन्न सडक भएकै काठमाडौंका सडकमा जेब्रा क्रसिङको हालत कस्तो छ त? पहिलोपोस्टका रोजन श्रेष्ठको लेन्सबाट हेर्दा देखिएको जेब्रा क्रसिङ यस्तो छ :